Celebrity Archives - Shwe Khit
သရုပ်ဆောင်အောင်မင်းခန့်က မာနမကြီးတဲ့အကြောင်းကို ပြောပြလာတဲ့ ဆရာတော်တစ်ပါး
December 2, 2021 by Zaw Hein
လက်မှတ်ထိုးပေးခဲ့သလိုရွာထဲမှာသတင်းကြားလို့ သူ့ကိုလာကြည့်တဲ့အဖွားကိုလဲအဖွားရယ်ပင်ပန်းလိုက်တာတဲ့၊သားလာခဲ့မှာပေါ့လို့ရိုသေစွာပြန်ပြောနေပုံလေးကိုဘဘုန်းမျက်စိရှေ့မှာမြင်တွေ့ခဲ့ရတာမို့မာနမကြီးတဲ့မင်းသားဆိုပြီးစိတ်ထဲကနေအမှတ်တွေ ပေးနေမိတော့တယ်
လက္မွတ္ထိုးေပးခဲ့သလို႐ြာထဲမွာသတင္းၾကားလို႔ သူ႔ကိုလာၾကည့္တဲ့အဖြားကိုလဲအဖြားရယ္ပင္ပန္းလိုက္တာတဲ့၊သားလာခဲ့မွာေပါ့လို႔႐ိုေသစြာျပန္ေျပာေနပုံေလးကိုဘဘုန္းမ်က္စိေရွ႕မွာျမင္ေတြ႕ခဲ့ရတာမို႔မာနမႀကီးတဲ့မင္းသားဆိုၿပီးစိတ္ထဲကေနအမွတ္ေတြ ေပးေနမိေတာ့တယ္။
တော်လှန်ရေးမလုပ်လို့ ခင်ဗျားတို့ အားမပေးလည်း ကျွန်တော့်ရဲ့ အောင်မြင်မှုကတော့ လျော့သွားမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပရိတ်သတ်ကို ဒဲ့စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့ အောင်ရဲလင်း
တော်လှန်ရေးမလုပ်လို့ ခင်ဗျားတို့ အားမပေးလည်း ရတယ်ဆိုပြီး ပရိတ်သတ်တွေကို ဒဲ့စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့ အောင်ရဲလင်း
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ အမိုက်စား ဘော်ဒီနဲ့ နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေ အသည်းစွဲ အားပေးကြတဲ့ မင်းသားချော အောင်ရဲလင်းကတော့ ဗီဒီယို ဇာတ်ကား ပေါင်းများစွာမှာလည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး အောင်မြင်နေတဲ့သူ တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။
အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ဖေ့ဘွတ်ပေါ်ကနေပျောက်သွားတဲ့ အောင်ရဲလင်းကတော့ အစ်စတယ်ဂရမ်မှာပဲ သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကို မျှဝေနေခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အခြားအနုပညာရှင်တွေ တော်လှန်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းနေချိန်မှာ သရုပ်ဆောင် အောင်ရဲလင်းကတော့ ရည်းစားတွေ ထည်လဲတွဲပြီးအသဲကွဲလိုက် ဘီယာဘားသွားလိုက်နဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီလို ကလပ်တွေမှာပဲ အချိန်ကုန်နေတဲ့ပုံတွေကြောင့် ပရိတ်သတ်တချို့ရဲ့ဝေဖန်မှုတွေ မြှင့်တက်လာခဲ့တဲ့ နောက်ပိုင်းမှာတော့ သရုပ်ဆောင်အောင်ရဲလင်းက ပရိတ်သတ်တွေကို အခုလိုပဲ တုန့်ပြန်ခဲ့ပါတယ်
တော်လှန်ရေးမလုပ်လို့ ခင်ဗျားတို့ အားမပေးလည်း ရတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကတော့ လျော့သွားမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဂရုကို မစိုက်တာပါတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ။
ေတာ္လွန္ေရးမလုပ္လို႔ ခင္ဗ်ားတို႔ အားမေပးလည္း ရတယ္ဆိုၿပီး ပရိတ္သတ္ေတြကို ဒဲ့စိန္ေခၚလိုက္တဲ့ ေအာင္ရဲလင္း
ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ အမိုက္စား ေဘာ္ဒီနဲ႔ ႏႈတ္ခမ္းနီမေလးေတြ အသည္းစြဲ အားေပးၾကတဲ့ မင္းသားေခ်ာ ေအာင္ရဲလင္းကေတာ့ ဗီဒီယို ဇာတ္ကား ေပါင္းမ်ားစြာမွာလည္း ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္ေနတဲ့သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။
အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ ေဖ့ဘြတ္ေပၚကေနေပ်ာက္သြားတဲ့ ေအာင္ရဲလင္းကေတာ့ အစ္စတယ္ဂရမ္မွာပဲ သူ႔ရဲ႕လႈပ္ရွားမႈေတြကို မွ်ေဝေနခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
အျခားအႏုပညာရွင္ေတြ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္မွာ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေအာင္ရဲလင္းကေတာ့ ရည္းစားေတြ ထည္လဲတြဲၿပီးအသဲကြဲလိုက္ ဘီယာဘားသြားလိုက္နဲ႔ အလုပ္ရႈပ္ေနခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အဲ့ဒီလို ကလပ္ေတြမွာပဲ အခ်ိန္ကုန္ေနတဲ့ပုံေတြေၾကာင့္ ပရိတ္သတ္တခ်ိဳ႕ရဲ႕ေဝဖန္မႈေတြ ျမႇင့္တက္လာခဲ့တဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ေအာင္ရဲလင္းက ပရိတ္သတ္ေတြကို အခုလိုပဲ တုန႔္ျပန္ခဲ့ပါတယ္
ေတာ္လွန္ေရးမလုပ္လို႔ ခင္ဗ်ားတို႔ အားမေပးလည္း ရတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈေတြကေတာ့ ေလ်ာ့သြားမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဂ႐ုကို မစိုက္တာပါတဲ့ ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ။
Categories Celebrity, ကြားသိရသမျှ Leaveacomment
သရုပ်ဆောင်ယွန်းယွန်း ကို နားလည်ခွင့်လွတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုလာတဲ့ သူမရဲ့ပရိတ်သတ်များ
အမျိုးသမီးတိုင်းကြုံတတ်တဲ့ကိစ္စတွေ၊ဒီအသက်၊ဒီအရွယ်မှာအသက်20ကျော်အရွယ်လေးမှာဖြစ်လေ့ ဖြစ်ထရှိတဲ့အရာတွေတစ်ခါတလေနှလုံးသားနဲ့ ဦးနှောက်ထိမ်းချုပ်ရခက်နေတဲ့အချိန်တွေမှာ သာယာမှုကြောင့်ဆုံးဖြတ်ရခက်တဲ့အခြေအနေတွေ နောက်ဆုတ်ရင်းကရှေ့တိုးနေမိတတ်တဲ့ အခြေအနေ‌တွေကြုံရနိုင်ပါတယ်။
မိန်းမချင်း၊နှမသားချင်ကိုယ်ချင်းမစာမနာအသံဖိုင်တွေအားရပါးရရှယ်ပြီးblameနေတာကိုယ်တစ်ဦးထဲသဘောအရတော့လုံးဝမကြိုက်ပါဘူး၊သူများရဲ့ ပါဆင်နယ်ကိစ္စကိုအဆုံးထိဝင်ပါပြီးသူများဘဝကို အဆုံးထိမြောင်ထဲပစ်ချချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမထားစေချင်ဘူး၊လူတိုင်းအမှားနဲ့မကင်းဘူး။
အဲ့လိုအမှားမျိုးကိုယ့်ဆီရောက်လာရင်ကိုယ်ဘယ်လိုနေမလဲ၊အရှက်လွန်ပြီးတစ်ခုခုလုပ်မိတဲ့ အခြေအနေကြုံလာရင်၊သို့၊အရှက်ကြောင့် အသက်ပါပေးလိုက်ရရင်blameတဲ့လူတွေအားလုံးမှာတာဝန်ရှိပါတယ်၊ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ယောကျာ်း၊ ဖောက်ပြန်မှန်းသိရဲ့ပြန်လက်ခံတဲ့သူ၊ရည်းစားရှိရဲ့ စိတ်သာယာမှုကြောင့်တွဲမိတဲ့သူ၃ယောက်စလုံးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ကိစ္စပါ။
ဒီလိုကိစ္စမျိုးကတော်လှန်ရေးမတိုင်ခင်ကတည်းက သူတို့ပြသနာဖြစ်နေတာပါအခုမှလည်းမဟုတ်ဘူး၊ လူသိရှင်ကြားရှင်းထားပြီးပြန်ပက်သပ်ကြတာ၊အခုမှဘာလို့လူသိများတဲ့အမျိူသမီးငယ်တစ်ယောက်အပေါ်နှမသားချင်းမစာမနာ၊မိန်းမချင်းကိုယ်ချင်းမစားနာဘာဖြစ်လို့ဝိုင်းပြီblameနေကြတာလဲကွယ်။
အမ်ိဳးသမီးတိုင္းႀကဳံတတ္တဲ့ကိစၥေတြ၊ဒီအသက္၊ဒီအ႐ြယ္မွာအသက္20ေက်ာ္အ႐ြယ္ေလးမွာျဖစ္ေလ့ ျဖစ္ထရွိတဲ့အရာေတြတစ္ခါတေလႏွလုံးသားနဲ႔ ဦးေႏွာက္ထိမ္းခ်ဳပ္ရခက္ေနတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ သာယာမႈေၾကာင့္ဆုံးျဖတ္ရခက္တဲ့အေျခအေနေတြ ေနာက္ဆုတ္ရင္းကေရွ႕တိုးေနမိတတ္တဲ့ အေျခအေန‌ေတြႀကဳံရႏိုင္ပါတယ္။
မိန္းမခ်င္း၊ႏွမသားခ်င္ကိုယ္ခ်င္းမစာမနာအသံဖိုင္ေတြအားရပါးရရွယ္ၿပီးblameေနတာကိုယ္တစ္ဦးထဲသေဘာအရေတာ့လုံးဝမႀကိဳက္ပါဘူး၊သူမ်ားရဲ႕ ပါဆင္နယ္ကိစၥကိုအဆုံးထိဝင္ပါၿပီးသူမ်ားဘဝကို အဆုံးထိေျမာင္ထဲပစ္ခ်ခ်င္တဲ့စိတ္ဓာတ္မ်ိဳးမထားေစခ်င္ဘူး၊လူတ္ိုင္းအမွားနဲ႔မကင္းဘူး။
အဲ့လိုအမွားမ်ိဳးကိုယ့္ဆီေရာက္လာရင္ကိုယ္ဘယ္လိုေနမလဲ၊အရွက္လြန္ၿပီးတစ္ခုခုလုပ္မိတဲ့ အေျခအေနႀကဳံလာရင္၊သို႔၊အရွက္ေၾကာင့္ အသက္ပါေပးလိုက္ရရင္blameတဲ့လူေတြအားလုံးမွာတာဝန္ရွိပါတယ္၊ေဖာက္ျပန္တတ္တဲ့ေယာက်ာ္း၊ ေဖာက္ျပန္မွန္းသိရဲ႕ျပန္လက္ခံတဲ့သူ၊ရည္းစားရွိရဲ႕ စိတ္သာယာမႈေၾကာင့္တြဲမိတဲ့သူ၃ေယာက္စလုံးနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ကိစၥပါ။
ဒီလိုကိစၥမ်ိဳးကေတာ္လွန္ေရးမတိုင္ခင္ကတည္းက သူတို႔ျပသနာျဖစ္ေနတာပါအခုမွလည္းမဟုတ္ဘူး၊ လူသိရွင္ၾကားရွင္းထားၿပီးျပန္ပက္သပ္ၾကတာ၊အခုမွဘာလို႔လူသိမ်ားတဲ့အမ်ိဴသမီးငယ္တစ္ေယာက္အေပၚႏွမသားခ်င္းမစာမနာ၊မိန္းမခ်င္းကိုယ္ခ်င္းမစားနာဘာျဖစ္လို႔ဝိုင္းၿပီblameေနၾကတာလဲကြယ္။
မမှတ်မိနိုင်လောက်အောင် ပြောင်းလဲသွား တဲ့ နာမည်ကြီး IC အဖွဲ့ရဲ့ အဆိုတော် လေးဖြူရဲ့ ပုံရိပ်များ..
November 30, 2021 November 30, 2021 by Zaw Hein
မြန်မာပြည်မှာ လေးဖြူလို့ ဆိုလိုက်ရင် မသိသူ မရှိသလောက် နီးပါး ရှားတယ်လို့ ဆိုရလောက်အောင် ရော့ကာ ဘုရင်ကြီး လေးဖြူရဲ့ အရှိန်အဝါက ကြီးမားပါတယ်အသံပါဝါ အားကောင်းကောင်းနဲ့ စင်ပေါ်မှာ ရော့ကာဟန်မာန်အပြည့်နဲ့ သီဆိုလေ့ရှိတဲ့ အဆိုတော်ကြီး လေးဖြူရဲ့ ပုံစံဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့ လူငယ်တွေကြားမှာ စံပြုအလေးထားစရာ ပုံရိပ်တခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာ ရော့ကာကြီး လေးဖြူတယောက် ပျောက်ချင်းမလှ ပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်ကားရတဲ့ သတင်းတွေအရတော့ ဘန် ကောက်ကို ထွက်သွားပြီး အနုပညာအလုပ် ဘာမှ မလုပ်တော့ဘဲ နေနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
လူမြင်ကွင်းကနေ (၁၀) လကြာ ပျောက်ကွယ်ခဲ့တဲ့ ရော့ကာကြီး လေးဖြူရဲ့ လတ် တလော ပုံရိပ်တချို့ကို သူနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ ပရိသတ်တချို့က အင်တာနက် လူမှုကွန်ယက်မှာ တင်ခဲ့ပါတယ်
မယုံနိုင်လောက်အောင်ပြောင်းလဲသွားတဲ့ ရော့ကာကြီးလေးဖြူရဲ့ ပုံတွေကိုတွေ့မြင်သူတိုင်းကအံ့အားသင့်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အနုပညာ အလုပ်တွေ မလုပ်ရတာကြောင့် စိတ်ဓာတ်တွေကျပြီး ဒီလောက် အိုစာသွားတာ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်း အမာခံ ပရိသတ်တချို့က ထင် ကြေးပေးလျက် ရှိပါတယ်။
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရော့ကာကြီး လေးဖြူတယောက် အရင်လို ကျန်းမာရွှင်လန်းပြီးသူမြတ်နိုးတဲ့ သီချင်းတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကို ဖျော်ဖြေနိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်။
ျမန္မာျပည္မွာ ေလးျဖဴလို႔ ဆိုလိုက္ရင္ မသိသူ မ႐ွိသေလာက္ နီးပါး ႐ွားတယ္လို႔ ဆိုရေလာက္ေအာင္ ေရာ့ကာ ဘုရင္ႀကီး ေလးျဖဴရဲ႕ အ႐ွိန္အဝါက ႀကီးမားပါတယ္အသံပါဝါ အားေကာင္းေကာင္းနဲ႔ စင္ေပၚမွာ ေရာ့ကာဟန္မာန္အျပည့္နဲ႔ သီဆိုေလ့႐ွိတဲ့ အဆိုေတာ္ႀကီး ေလးျဖဴရဲ႕ ပုံစံဟာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ လူငယ္ေတြၾကားမွာ စံျပဳအေလးထားစရာ ပုံရိပ္တခု ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ေန႔ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္မွာ ေရာ့ကာႀကီး ေလးျဖဴတေယာက္ ေပ်ာက္ခ်င္းမလွ ေပ်ာက္သြားခဲ့ပါတယ္ကားရတဲ့ သတင္းေတြအရေတာ့ ဘန္ ေကာက္ကို ထြက္သြားၿပီး အႏုပညာအလုပ္ ဘာမွ မလုပ္ေတာ့ဘဲ ေနေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
လူျမင္ကြင္းကေန (၁၀) လၾကာ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့တဲ့ ေရာ့ကာႀကီး ေလးျဖဴရဲ႕ လတ္ တေလာ ပုံရိပ္တခ်ိဳ႕ကို သူနဲ႔ ေတြ႕ဆုံခဲ့တဲ့ ပရိသတ္တခ်ိဳ႕က အင္တာနက္ လူမႈကြန္ယက္မွာ တင္ခဲ့ပါတယ္
မယုံႏိုင္ေလာက္ေအာင္ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ ေရာ့ကာႀကီးေလးျဖဴရဲ႕ ပုံေတြကိုေတြ႕ျမင္သူတိုင္းကအံ့အားသင့္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
အႏုပညာ အလုပ္ေတြ မလုပ္ရတာေၾကာင့္ စိတ္ဓာတ္ေတြက်ၿပီး ဒီေလာက္ အိုစာသြားတာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔လည္း အမာခံ ပရိသတ္တခ်ိဳ႕က ထင္ ေၾကးေပးလ်က္ ႐ွိပါတယ္။
ဘာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေရာ့ကာႀကီး ေလးျဖဴတေယာက္ အရင္လို က်န္းမာ႐ႊင္လန္းၿပီးသူျမတ္ႏိုးတဲ့ သီခ်င္းေတြနဲ႔ ပရိသတ္ေတြကို ေဖ်ာ္ေျဖႏိုင္ပါေစလို႔ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းလိုက္ပါတယ္။
ကိုစည်သူဝင်းကို အကိုတစ်ယောက်လိုပဲသဘောထားပီး သူမရဲ့ အကောင့် က HACK ခံရ တဲ့အကြောင်း ပြောလာတဲ့ ယွန်းယွန်း
November 30, 2021 by Zaw Hein
ခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စတွေအားလုံး အကြောင်း ယွန်း ရှင်းပြပါရစေ . . .ချစ်လှစွာသော ပရိသတ်ကြီးရေ .. ခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံး အကြောင်း ယွန်း ရှင်းပြပါရစေ . . .
ကိုစည်သူဝင်းနဲ့ပြောတဲ့ ယွန်း Acc က Hack ခံရတာနှစ်နှစ်ရှိပါပီ .Hack တဲ့သူက ယွန်းကို ကလေးသရုပ်ဆောင်ဘဝထဲက အားပေးခဲ့တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ဦးလို့သိရပီး သူ့မျက်နှာကို ယွန်း မမြင်ဖူးပါဘူး . . ……
ပရိသတ်ကြီးကို Hack ခံရတာ မပြောဖူးဆိုတာကယွန်းလို ခေတ်ပညာတတ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ Hackခံရတာ မလုပ်တတ်ဖူးလားလို့ အထင်သေးခံရမှာစိုးလို့ပါ .
ကိုစည်သူဝင်းနဲ့စကားလာပြောတာက Hack မလေးပါပဲ . သူက ယွန်း အသံနဲ့ဆင်ပါတယ် . ဖုန်းပြောခဲ့ဖူးတာမလို့ပါ .ကိုစည်သူဝင်းကို အကိုတစ်ယောက်လိုပဲသဘောထားပီး သူကလဲ အပြင်မှာဆုံရင်Messenger ကကိစ္စတွေကို မပြောတော့ ယွန်းလဲမသိခဲ့ပါဖူး . သူသာပြောခဲ့ရင် ယွန်း ဖြေရှင်းမှာပါ …
အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း သဲ ကလဲ Hack ခံရတာ မသိတော့ယွန်း သုံးနေတယ်ပဲထင်ပီး စကားတွေသွားပြောနေတာပါ . ခုတော့ Hack တဲ့ ကောင်မလေးကလဲသူ့အမှားသူသိပီး ယွန်းကို Acc ပြန်ပေးခဲ့ပါတယ် .ယွန်းကိစ္စကြောင့် အရေးကြီးသတင်းတွေ ဖုံးသလိုဖြစ်သွားရင် တောင်းပန်ပါတယ်နော် ။။ ။။
ခုျဖစ္ခဲ့တဲ့ ကိစၥေတြအားလုံး အေၾကာင္း ယြန္း ႐ွင္းျပပါရေစ . . .ခ်စ္လွစြာေသာ ပရိသတ္ႀကီးေရ .. ခုျဖစ္ခဲ့တဲ့ကိစၥေတြအားလုံး အေၾကာင္း ယြန္း ႐ွင္းျပပါရေစ . . .
ကိုစည္သူဝင္းနဲ႔ေျပာတဲ့ ယြန္း Acc က Hack ခံရတာႏွစ္ႏွစ္႐ွိပါပီ .Hack တဲ့သူက ယြန္းကို ကေလးသ႐ုပ္ေဆာင္ဘဝထဲက အားေပးခဲ့တဲ့ မိန္းကေလးတစ္ဦးလို႔သိရပီး သူ႕မ်က္ႏွာကို ယြန္း မျမင္ဖူးပါဘူး . . ……
ပရိသတ္ႀကီးကို Hack ခံရတာ မေျပာဖူးဆိုတာကယြန္းလို ေခတ္ပညာတတ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ Hackခံရတာ မလုပ္တတ္ဖူးလားလို႔ အထင္ေသးခံရမွာစိုးလို႔ပါ .
ကိုစည္သူဝင္းနဲ႔စကားလာေျပာတာက Hack မေလးပါပဲ . သူက ယြန္း အသံနဲ႔ဆင္ပါတယ္ . ဖုန္းေျပာခဲ့ဖူးတာမလို႔ပါ .ကိုစည္သူဝင္းကို အကိုတစ္ေယာက္လိုပဲသေဘာထားပီး သူကလဲ အျပင္မွာဆုံရင္Messenger ကကိစၥေတြကို မေျပာေတာ့ ယြန္းလဲမသိခဲ့ပါဖူး . သူသာေျပာခဲ့ရင္ ယြန္း ေျဖ႐ွင္းမွာပါ …
အခ်စ္ဆုံးသူငယ္ခ်င္း သဲ ကလဲ Hack ခံရတာ မသိေတာ့ယြန္း သုံးေနတယ္ပဲထင္ပီး စကားေတြသြားေျပာေနတာပါ . ခုေတာ့ Hack တဲ့ ေကာင္မေလးကလဲသူ႕အမွားသူသိပီး ယြန္းကို Acc ျပန္ေပးခဲ့ပါတယ္ .ယြန္းကိစၥေၾကာင့္ အေရးႀကီးသတင္းေတြ ဖုံးသလိုျဖစ္သြားရင္ ေတာင္းပန္ပါတယ္ေနာ္ ။။ ။။